साँसदको प्रश्नः विदेशमा भएका नेपालीले कहिले भोट हाल्न पाउने ? - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
साँसदको प्रश्नः विदेशमा भएका नेपालीले कहिले भोट हाल्न पाउने ?
प्रतिनिधिसभाकी साँसद डा. डिला संग्रौला पन्तले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई मतदानको अधिकार दिलाउने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । साँसद संग्रौला प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी संयोजक हुन् ।
उनले प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै दिएको आदेश कार्यान्वयमा सरकार किन मौन छ भनेर प्रश्न समेत गरिन् । सर्वोच्चले २०७४ चैत्र ११ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् मौरिसससँग नेपालको भयो श्रम समझदारी, यस्ता छन् नेपाली श्रमिकले पाउने सुविधा